Manisy tombo-kase ny tombo-kase satria matetika no atao amin'ny hafanan'ny efi-trano ny fanodinana gazety, antsoina koa hoe fitomboka mangatsiaka. Ny fananganana stamping dia iray amin'ireo fomba fanodinana tsindry vy. Izy io dia teknolojia famoronana injeniera mifototra amin'ny teôria deformation plastika vy. Ny akora ampiasaina amin'ny fanodinana haingo dia mazàna lamba na ravina, koa nantsoina hoe nohomboana vy io. (1) Ny fahamendrehana dimensional an'ny ampahany nohomboana dia omen'ny bobongolo, ary mitovy ...
Amin'ny maha-mpamorona lasitra tsindrona plastika ao Shina, manampahaizana manokana izahay amin'ny fanaovana lasitra fanindronana plastika isan-karazany ho an'ny fiara, kojakojan-trano, kojakoja ara-pitsaboana, fitaovana elektronika ary fanatanjahan-tena, ary koa ny fampiharana OEM indostrialy ankapobeny. Ny orinasanay dia manarona faritra misy atrikasa mihoatra ny 3,800 metatra toradroa, voahodidin'ny fitaterana mety. Amin'izao fotoana izao, ny vondrona misy anay dia mahatratra 150 mahery ny mpanamboatra fitaovana any Sina sy ny fananana renivohitra ka mahatratra 15 tapitrisa RMB. Ny fahafahantsika dia ...
Fanariana maty Inona no atao hoe famonoana olona? Ny fanerena fanerena dia antsoina hoe fomba famonoana maty, fomba famoahana rano alika an-idina ao anaty efitrano fanerena, ny lavaky ny lasitra vy dia fenoina haingam-pandeha, ary ny ranon-tsiranoka dia mihamafy eo ambany tsindry mba hamoronana casting. Tombony sy fatiantoka ny famoahana maty: Tombony: kalitao avo lenta famokarana avo lenta fatiantoka fatiantoka: faran'izay voafetra dia tsy misy afa-tsy aluminium zinc manezioma firamainty varahina varahina azo ampiasaina amin'ny fanariana hatreto. Expe ...
Ekena ny endriny namboarina. Tongasoa ny kaomandy OEM / ODM. Izahay dia miavaka amin'ny famokarana arakaraka ny santionany na ny fanontanan'ny mpanjifanay. Azafady mifandraisa aminay malalaka ho namana tsara raha liana amin'ny vokatra sy serivisinay ianao. Fomba fanjifana avo lenta avo lenta ho an'ny fadin-tseranana manamboatra sy manamboatra karazana lava-kazo / muti-lavaka ho an'ny faritra mitovy / vava ao amin'ny fianakaviana 2-3 nosoloina bobongolo ho an'ny fifanakalozana fitaovana SKD61, H13, Dievar, QDN, 8407, 2234V, TQ1, 2343, 45 # Steel , sns Drafitra mifanaraka ...